MICROFLOW ikuku diffusers na-ji permeable akwa engineered kpọmkwem etoju nke porosity. Ọtụtụ nde obere ikuku jets na-atara site diffuser ákwà.
A, MICROFLOW diffusers na-eji chụpụ kama mix ikuku. Iji mezuo ikuku Ndahie ikuku jets ga-agbasa ngwa ngwa. Ebe a POWERFLOW ikuku ugboelu nwere ike buru 20 'ma ọ bụ karịa na-agbasa kpamkpam, obere MICROFLOW ikuku jets agbasa n'ime 6 "nke diffuser n'elu.
N'ihi na ike ọsọ nke obere ikuku jets slows ngwa ngwa, ikuku n'ozuzu nēche ịgbada ka a uka na chụpụ ikuku na ala etoju nke ụlọ.
MICROFLOW ikuku diffusers na-eji bụ n'ihi na atọ pụrụ iche ngwa. Ebe ọ bụ na ha chụpụ kama mix ikuku, ha dị nnọọ oru oma na wepụ metọrọ emetọ ikuku. Nke abuo, MICROFLOW diffusers nwere ike ije ozi dị ka a nyo na mwute, dị ka nri nhazi, ma mgbe ahụ ga-achọ Ugboro Laundering. Na nnọọ nso, mwute ebe, MICROFLOW pụrụ ịnapụta jụụ ikuku enweghị drafts.
The isi ihe na MICROFLOW ikuku diffuser imewe bụ ákwà porosity, static mgbali, na diffuser ogologo na diffuser n'obosara. Ọ dị mkpa na-eji a nyo na njikọ na MICROFLOW diffusers iwelata Laundering. Ngwa na-atụ aro na-agụnye; Office ohere, telekomunikashions, Food nhazi, klas, Clean ụlọ, na ule labs.
USB Iwepụ Okporo ígwè Halo Suspension HD Okporo ígwè
Na-atụ aro Ngwa
Klas Clean Ụlọ Food nhazi Office Space
Air Jet plọg ghọọ mmanụ igbapu Bịaruo ụdọ Fabric Damper Fittings Esịtidem End Cap Logos Mkpọchi uwe na Velcro Connections
polyester bụ a adịchaghị ọkwa uncoated ákwà. Ọ nwere a gbazee okpomọkụ nke 350 ° F na ike ga-laundered na obere ngalaba. Polyester bụ ọkụ retardant na osobo ASTM E-84 Class A.
a) USB: erughị ala cable bụ ihe kasị echekwa nhọrọ. Maka niile diameters, Single cable ruo 30 "dayameta na-amụba okpukpu abụọ 48" dayameta na atọ n'elu na. Snaphooks na-spaced on 36 "ebe a na dị na plastic, igwe anaghị agba nchara. USB dị na kpaliri, igwe anaghị agba nchara, na vinyl ntekwasa. The usoro mejupụtara a USB (3/16 "dayameta), turnbuckle, eyebolts na cable clamps.
b) Halo Suspension: New Halo erughị ala nkwusioru usoro (HTS) enye ọdịdị gị FlowCon diffuser usoro a ga-inflated mgbe ikuku njikwa usoro bụ gbanyụọ. Nke a na nhọrọ nwere ike ga-eji na a mfe otu n'usoro cable nkwusioru ma ọ bụ otu HD okporo ígwè na-FlowCon diffuser achọ inflated enweghị airflow. Oke site na 10 "ka 36" n'obosara, a nhọrọ bụ zuru okè n'ihi na ngwa ebe deflated diffuser n'aka ala bụ a nsogbu. Ngalaba nwere ike mfe iwere ala na-asa na adịghị mmezi ọrụ mmanye. Components agụnye ọkọlọtọ otu n'usoro erughị ala USB ma ọ bụ anyị HD otu okporo ígwè usoro.
c) HD Okporo ígwè: New HD anodized aluminum okporo ígwè bụ anyị adịchaghị tren usoro. Sleek ezigbo anya n'ihi na anyị FlowCon ákwà diffuser usoro. Maka niile diameters, Single okporo ígwè ruo 30 "dayameta na-amụba okpukpu abụọ 48" dayameta na atọ n'elu na. Gliders na-spaced on 36 "ebe a na dị na plastic. The usoro mejupụtara HD okporo ígwè, okporo ígwè na-akwado, couplers, na vetikal akwado (speed njikọ). Okirikiri bends dị izute n'ikpere aka okirikiri.
d) Iwepụ Okporo ígwè: Iwepụ anodized aluminum okporo ígwè ga-eji na ngwa na-FlowCon diffuser usoro nwere na-nso n'uko. Iwepụ okporo ígwè nwere na-mmasị ka a ewepụghị n'uko ma ọ bụ T-Bar usoro. Iwepụ ugwu okporo ígwè e mere na-akwado anyị 'D' duct diffusers. D duct diffusers na-eji mgbe n'uko elu bụ nchegbu. A abụọ Iwepụ tren usoro dị mkpa iji na-akwado 'D' duct diffuser. Nha si 6 "18" okirikiri (12 "ka 36" obosara) dị. The usoro mejupụtara ndị Iwepụ n'ugwu okporo ígwè, na ọgwụgwụ ibe. Okirikiri bends dị.
Osote: Power Flow Fabric duct
Air ikuku mmiri duct
Air Kanvas duct
Air ventilashion Mgbanwe duct
Nwa Ehi Barn Air duct
Ájá Mmịpụta duct
ngosi Center Fabric Air duct
Bọmbụ gbawara agbawa Gosiri Mgbanwe duct
Fire eguzogide ọgwụ Fabric duct
Fire eguzogide ọgwụ Mgbanwe duct
Mgbanwe Air Ducting
Mgbanwe Air Ducts
Mgbanwe HVAC duct
Fume Mmịpụta Mgbanwe duct
uwe Industry Fabric Air duct
Ọkara Now HVAC duct
HVAC gwara mmanụ duct
gwara mmanụ Mgbanwe Air duct
gwara mmanụ Mgbanwe ekupụ duct
Ntụrụndụ Place Air duct
perforated Mgbanwe duct
akụkụ anọ Mgbanwe duct
Now Air duct
Now Air Ducting
Now Fabric Air Ducting
Now Mgbanwe Air Ducting
Now HVAC duct
ọkara gburugburu Fabric duct
ọkara gburugburu Fabric Ducting
ọkara Now Fabric duct
ọkara Now Fabric Ducting
ụlọ ahịa Fabric Air duct
Textile Mgbanwe duct
kwes na Na duct
ventilashion Air duct
ventilashion Mgbanwe duct
nkwakọba Fabric Air duct